မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေမဖြစ်ရလေအောင် ? - Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog
Home » Knowledge » မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေမဖြစ်ရလေအောင် ?
ဒီအချိန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေများကြောင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီး အကြောက်တရား၊ဝမ်းနည်းမှု၊စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှု စတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်များကိုအနည်းနဲ့အများတော့ခံစားနေကြရပါတယ်။အဲ့အတွက် ဖြစ်နိုင်ရင် တစ်ယောက်ထဲတွေးပြီးခံစားနေတာထက်စာရင် ကိုယ်ယုံကြည်ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့အတူ စကားများများပြောပေးသင့်ပါတယ်။
SNS တွေကတက်လာတဲ့ သတင်းမှန်သမျှဟာ အမှန်တွေကြီးမဟုတ်တာကိုလဲ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းအရင်းအမြစ်တွေကတင်တဲ့ သတင်းတွေကိုသာ ပုံမှန်စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ဒီအချိန်ကာလမှာ Rumors တွေ Fake newsတွေကြောင့် အလွန်အကျွံ Stress များနေမဲ့အစား အထူးသတိတော့ရှိပါ ဒါပေမဲ့ အကြောက်မလွန်သင့်ပါဘူး။
တကယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုယ် လိုတာထက်ပိုပြီး စိုးရိမ်ဖိစီးမှုများနေတယ်လို့ သံသယရှိပါက သင့်ရဲ့ SNS တွေ Television တွေကနေတစ်ဆင့် သတင်းတွေဖတ်ခြင်း ကြည့်ရှုခြင်းစတဲ့ သုံးစွဲတဲ့အချိန်ပမာဏကို Limit လုပ်သင့်ရင်လုပ်လိုက်ပါ။သတင်းတွေစောင့်ကြည့်တာဟာမမှားပေမဲ့ သင်ဟာ SNS ကိုအလွန်အကျွန်သုံးစွဲနေပြီး သတင်းမှားတွေ သို့မဟုတ် စိတ်မချမ်းသာစရာတွေသာဆက်တိုက်မြင်နေရမယ်ဆိုရင် သင့်ရဲ့အကြောက်တရားနဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုကြီးထွားလာစေမှာပဲဖြစ်လို့ လိုအပ်သလောက်သာသုံးသင့်ပါတယ်။
All times are GMT 6.5. The time now is 2:46 pm.